Nzira yekugadzira makenduru: iwo akanakisa matipi uye madiki | Green Renewables
Isu tinoziva kuti pakushongedza, makenduru ipfungwa yakanaka. Kunyanya kana ichinhuwirira. Ivo vane anotaridzika anotaridzika ekushongedza chitarisiko uye vanofanidza akasiyana siyana anogona kusangana. Iwe unogona kushandura iyo nzvimbo kuita yakawanda inogamuchirwa nzvimbo uye gadzira chimiro chinokodzera iwe. Kune vamwe vanhu vanoda kudzidza kugadzira makenduru nenzira yakapfava uye inoshanda.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza nhanho nhanho maitiro ekugadzira makenduru uye kuti iwo maitiro avo.
1 Makenduru ane hwema
2 Kugadzira makenduru kumba
3 Nzira yekugadzira makenduru nhanho nhanho
Makenduru ane hwema
Makenduru ane hwema ane hwema hwekunaka, unova mutsauko pakati penzvimbo yakashongedzwa zvakanaka uye inodziya, inoshamwaridzika imba. Navo, tinogona kushandura chero nharaunda kuti ive yekuzorora uye yemashiripiti nzvimbo, ichimutsa dzimwe nguva nenzvimbo. Nechikonzero ichi, makenduru anonhuwirira ave chimwezve chinhu mukushongedza kwedu uye chipo chakanakisa chekupa paKisimusi kana chero imwe nguva yegore.
Asi hazvisi izvo chete: makenduru zvakare mucherechedzo wekuvandudzwa, kujekeswa uye kunatswa. Ichi ndicho chikonzero ivo vachishandiswa kazhinji kazhinji mukusiyana kwetsika tsika kupoterera pasirese zvekuti ivo vanoshandiswa kusimudzira kufungisisa kana kugadzira imwe inoratidzira uye yekudanana mamiriro. Uye zvakare, zvinoenderana nekunhuwirira kwavo, vanogona zvakare kuve nemhedzisiro yehupenyu, kushushikana, kutandara kana kukurudzira matiri, uye nekuwedzera mamwe manzwiro.
Nhoroondo yemakenduru yakadzokera kumashure pakutanga kwekutanga budiriro. Kubva kumakenduru emafuta eRoma kune mamwe akanakisa anogadzira akagadzirwa kubva pakureba, michero yemiti, kana maIjipita vaishandisa matavi ane matope emombe kana gwayana. Kune ese tsika, Iyo ndiyo nzira huru yekuvhenekera uye inoshandiswa zvakare mumitambo yechitendero uye zvibairo.
Kuvapo kwayo sechiratidzo cheKisimusi zvakare kune nhoroondo yemazana emakore. Makenduru anoshandiswa kudzinga mweya yakaipa uye zvishoma nezvishoma inova chimwe chezvinhu zvakajairika zvemazororo aya. Muchokwadi, pane humbowo hwekuti muzana ramakore rechi XNUMX makenduru akaiswa pamiti yeKisimusi yeGerman kushongedza imba.
Kutanga nekuwanikwa kwemafuta muna 1850, makenduru akagadzirwa neparafiniGare gare, parafini nemagetsi zvikaonekwa mudzimba medu, zvese zvakachinja. Aya ndiwo marongero anoita kenduru pane imwe yekushongedza uye inonhuhwirira tsvene grail, kwete ingori turu yekushandisa.
Kugadzira makenduru kumba
Kana mashiripiti emakenduru achikufadzawo, saka unotoziva kuti kune zviuru zvemhando dzakasiyana, maumbirwo, hukuru uye mavara pamusika. Nekudaro, izvo zvinogona zvakare kugadzirwa kumba, uye ivo vari chaizvo yakapusa uye yepakutanga dhizaini iyo yakakwana sechipo. Ngatione kuti ndezvipi zvinhu zvinodiwa izvo zvinodiwa kuti tidzidze kugadzira makenduru.
Wakisi yakanatswa kana wakisi yeparafini (Unogona kuiwana pazvitoro zvehunyanzvi kana online.) Mari yacho inoenderana nekenduru yaunoda kugadzira uye saizi yayo.
Ruvara, matauriro esarudzo yako.
Imwe kana anopfuura mafuru kuumba makenduru ako.
Kunhuwirira. Unogona kushandisa maoiri akakosha, asi ita shuwa kuti iwo emhando yepasi zvakanyanya zvikasadaro haugone kuwana mibairo yakanaka.
Chirongo chewakisi yakanyungudutswa tsvimbo yekutungamira (ivo vanotengeswawo online uye muzvitoro zvine hunyanzvi), spatula yematanda uye tambo (iyo huwandu inoenderana nekenduru yaunoda kugadzira).
Nzira yekugadzira makenduru nhanho nhanho
Zvinotora nguva kuti udzidze kugadzira makenduru anonhuwirira, asi hazvina kuomarara. Ingo ita chokwadi chekutevera matanho ari pazasi:
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuita kudziisa wakisi mugango, pamusoro pepakati nepakati moto, kusvikira wanyungudika. Zano rakanaka nderokuzviita mubhati remvura (isa mudziyo pamwe newakisi muhari hombe) uye fambisa ne spatula.
Zvino, kana wakisi yatonhodza pasi zvishoma, wedzera iyo yekudya coloring uye mashoma madonhwe eunofarira flavour. Ive nekuchengera kuti urege kuzvidarika, zvikasadaro hwema hwaunopa hunobva hwakanyanya uye hunogumbura.
Tevere, inguva yekuchimisa: dururira wakisi yakanyungudika, yakavhenganiswa uye ine mavara muforoma yesarudzo yako (kutanga, usakanganwa kuzodza pasi uye mativi eforoma nedonhwe remafuta ekubikisa).
Ipapo batanidza tambo kukenduru uye sunga mugumo wekenduru kune tsvimbo yekutungamira. Uchaona gomba mudanda raunogona kupinda mukati medambo uye wopfuudza kune mumwe mugumo weforoma. Mimwe micheka inouya neyakagadzika tafura yekugadzirisa nyore nyore pamakenduru edu, kunyanya kana tichida kuaisa mumudziyo.
Pakupedzisira, cheka mupendero wetambo, kuve nechokwadi chekusiya chidimbu pamusoro kuti iwe ugone kuchibatidza pasina matambudziko.
Ino ndiyo nguva yekurega wakisi itonhore, maitiro aya anogona kutora maawa akati wandei. Kuti vaderedze nguva yekumirira, vanofanirwa kuiswa munzvimbo inotonhorera, ine rima kure nezuva.
Kana iwe uchida kusunungura makenduru (semuenzaniso, iwe unogona zvakare kusarudza kuasiya iwo mugirazi kana zvedongo zvirongo), wozviisa zvakare muforoma uye tora nezvigunwe zvako kana penzura kuti ubvise zvishoma nezvishoma mweya uye uzviite zvishoma nezvishoma. kunze kweforoma, izvi zvinodzivirira kenduru kubva pakuputsa kana kutyora.
Kugadzira makenduru kumba hakuwanzo kuunza njodzi yakanyanya, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti tiri kushandisa parafini, chinova chigadzirwa chinopfuta moto, kana changova mvura, inosvika pakushisa kwakanyanya. Naizvozvo, zvinogara zvichikurudzirwa kutevedzera zvinotevera chenjedzo.
Zvinokurudzirwa kupfeka magirovhosi uye magirazi.
Usambofa wakasiya moto usina kuchengetedzwa.
Zvinokurudzirwa kushandisa thermometer yekicheni kuratidza kuti hatina kupfuura muganho wekubvira chero nguva.
Kana wakisi ikabatira moto, kufukidza pani nejira uye kudzima gasi. Usawedzere mvura chero zvodii, nekuti izvi zvinongokurudzira marimi.
Chekupedzisira, namatira nemidziyo yawaimboshandisa kugadzira makenduru. Pasina mhosva unovasanganisa nechikafu chekubika.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekugadzira makenduru nhanho nhanho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Kugadzira makenduru
Renewable uye risingadzoreke simba